Infographic: Chii chiri Kuitwa Nevanhu Pamhepo?
Chishanu, Mbudzi 18, 2011 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Chii chiri kuitwa nevanhu online? Iyi infographic inotaurira mhinduro… ichinyora makore matatu e data kubva ku Pew Internet & American Hupenyu Project Yekutevera Ongororo kubva 2009, 2010 uye 2011. Iyo yakazara nzvero inofamba kuburikidza nevaraidzo, pasocial network, mari, nhau, bhizinesi, kunotenga, kutsvagisisa nekutenga!
Vanenge makumi masere muzana muzana yevakuru veAmerica vanoshandisa iyo Internet. Wati wambozvibvunza here zvavari kuita online? Vari kutumira email, kutengesa pamhepo, kana kufambisa mavhidhiyo eYouTube? Tsvaga pazasi.
Chii vanhu ita zvakanyanya online? Tumira kana kuverenga email. Chii vanhu ita zvishoma? Blog! Zvishoma zvinotyaira zvinodikanwa… Ndinoda chokwadi chekuti vanhu vazhinji havazi kublogi… zvinoreva kuti mukana wako wekuti unzwike wakanaka.
Infographic kubva Flowtown - Yemagariro Media Kushambadzira Chikumbiro.
Tags: pewPew Internet & American Hupenyu Project Yekutevera Ongororopew internet kutsvagisazvinoitwa nevanhu zvishoma pamhepozvinoitwa nevanhu zvakanyanya online